Infer Net Net Leads: Chọpụta ma zipụ ndị kacha mma na Salesforce | Martech Zone
Infer Net Ọhụụ Ọhụrụ: Chọpụta ma zipụ ndị kacha mma na Salesforce
Na Tọzdee, Septemba 15, 2015 Uzoamaka Nwankwo
Ndị ọchụnta ego na-agbasi mbọ ike ịkọwa ugwu data banyere ndị ahịa ha na ihe na-akpali ha. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe agaghị ekwe omume ịhụ oke ọhịa site na osisi mgbe ndị mmadụ lekwasịrị anya na sistemụ ndekọ ha na wepụta nghọta bara uru site na akara niile na sistemụ ndịiche dị ka Salesforce, Marketo na Google Analytics, yana isi mmalite na websaịtị.
Ole na ole ụlọ ọrụ nwere ihe onwunwe ma ọ bụ ọkachamara na-egwupụta data ha ma tinye nchịkọta na-ekpebi ụdị atụmanya ga-azụta ngwaahịa ha, na mgbe. Ndị na-anwa iji merie ihe ịma aka ahụ na ntinye isi na sistemụ ahịa azụmaahịa ha kwesịrị iji aka ha kọwaa iwu dabere na mmụọ mmuta ha na obere ọrụ nke ọrụ onye ọrụ.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ ụlọ ọrụ nwere ọnụnọ na-eduga na mbubata ndị ọzọ, ndị ọzọ na-adabere n'ahịa na-apụ apụ na ịzụ ahịa ezubere iche iji mee ka uto. Zọ kachasịsịsịsịsịsịsị iche bụ ịzụta nnukwu ndepụta nke ndu na-enyo enyo ma nwee olile anya ịchọta atụmanya ọma ole na ole, mana nke a chọrọ oge na ego dị ukwuu.
Kedu ka akara amụma na-adị iche karịa akara ọdịnala ọdịnala na azụmaahịa azụmaahịa?
Kama iji aka na-agbakwunye ihe maka ọrụ enyere, ụdị akara ngosi akparamagwa anyị na-eji igwe dị ike amụrụ ihe iji nweta ụdị ọrụ data dị n'ime ngwa ahịa akpaaka nke ụlọ ọrụ. Ndị ahịa na ndị na-ere ahịa nwere ike iji akara akparamaagwa mara amụma ihe ga-agbanwe na izu atọ na-abịa.
Kedu ka Infer si edozi ya ma enwere usoro kachasị mma metụtara mmejuputa?
Anyị na-ewepụta amụma ndị ahịa ziri ezi, nke egosiputara na njem ndị ahịa, nke na-enyere ụlọ ọrụ aka ị nweta nnukwu mbuli elu na akara mmeri, na-ebute mgbanwe, nha nha nha na ego a na-enweta ugboro ugboro. Fitdị anyị dabara adaba na-ebu amụma nchịkọta na igwe na-amuta ihe iji choputa ma oburu na odi onye zuru oke izutara ihe obula, ihe omume anyi na achota ma ha nwere ike izuta n'oge na adighi anya.
Anyị na-eme nke a site n'inyocha isi akara - dị ka ụdị azụmaahịa nke ụlọ ọrụ, ndị na-ere teknụzụ, mgbasa ozi dị mkpa, akwụkwọ mgbasa ozi ọha na eze, ọnụnọ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mmemme weebụsaịtị, data akpaaka ahịa, data ojiji ngwaahịa, na njirimara ndị ọzọ. Anyị achọpụtala na ndị ahịa anyị mepee uru kachasị uru mgbe ha jiri Infer ọ bụghị naanị nzacha ma dozie ụzọ ha, mana iji bulie mkpọsa azụmaahịa, melite ahịa ndị na-apụ apụ, mepụta ọgụgụ isi ọgụgụ isi, mepụta nkwekọrịta ọrụ ọkwa ahịa, wdg. Otu isi kacha mma omume anyị hụla na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ bụ ihe dị mfe 4X4 dabara adaba na akara ngosi omume nke na-enyere ha aka ịmepụta mmemme gburugburu akụkụ dị iche iche, dịka ọmụmaatụ site na iziga ihe kachasị mma, nke nwere ike ịzụta na-eduga ozugbo na elu ha.
Anyị Infer Net-New-eduga onyinye na-enye ndi otu ahia ihe ohuru nke olile anya di elu site na mmekorita ya na ndi n’enye data di ka InsideView, na iji uzo okwu eji amata udiri ulo oru iji choputa uzo kachasi nma. Ndị otu azụmaahịa na-ejikarị Infer iji depụta ndepụta nke aka ha, mana ugbu a, ha nwekwara ike ịzụta ụzọ ntanetị sitere n'aka anyị ozugbo, na-eme ka ụdị anyị pụrụ iche ahaziri iche maka akara kọntaktị oyi, ma kwụọ ụgwọ naanị maka akụkọ kachasị mma.
Kedu ihe dị iche iche nke Infer?
Anyị bụ ndị pụrụ iche na amụma oghere maka di na nwunye ihe - nke mbụ n'ihi na anyị miri emi ma lekwasịrị anya set nke insanely nwere ọgụgụ isi ịkọ isi na ngwaahịa. DNA anyị mejuputara omenala omenaala siri ike nke sitere na Google, Microsoft na Yahoo. Anyị dị oke egwu banyere inweta data na ịchọta mpaghara ebe sayensị data nwere ike ịmeghe uru kachasị maka ahịa na ahịa B2B.
Ebumnuche Infer bụ inyere ndị ụlọ ọrụ aka itolite n'ike sayensị data. Amụma amụma anyị na-enyere ike ọtụtụ ngwa dị iche iche maka ịre ahịa na ịre ahịa:
nzacha - Ngwa ngwa chọpụta ezigbo ụzọ ndu mgbe ị na-anụcha mkpọtụ niile (ụzọ ọjọọ).
Ibute ụzọ - Na-ebute ụzọ iji mee ka Ahịa na-elekwasị anya na atụmanya nke na-egosipụta akara ngosi ịzụ ahịa siri ike ma nwee ike nwee mmetụta kachasị ukwuu.
Net-ọhụrụ na-eduga - Mmanụ ọpụpụ ahịa site na ịchọta ụlọ ọrụ kachasị mma nke na-adịghị ugbu a na nchekwa data gị.
Na-azụlite - Nyochaa na - eduga na ọdụ data na - azụlite iji zipu atụmanya ịlaghachi ahịa ozugbo ha mechara tinye ọnụ.
Ogwe osisi Exec - Ntuziaka na-eme mkpebi, na-esepụta ọnọdụ ndị na-apụta, ma na-agbaso etu ọgbọ na-achọ si na-enye mmanụ gị.
N'ihi na ebumnuche anyị emetụbeghị ụlọ ọrụ na-ahụ maka ndụmọdụ, anyị anọgidela na-elekwasị anya na arụmọrụ na-arụ ọrụ ma na-anya ụgbọ, na-arụpụta ihe ndị ahịa anyị na-emegide ịdabere na ọrụ. Ọ bụ ya mere anyị ji agba ume ịme achịcha na-asọmpi ma hapụkwa teknụzụ anyị na injinia kacha mma, yana ịrụ ọrụ nlereanya na-ekwu okwu.
Tags: tinyetinye ndu ọhụrụndu akarandu ohurunchịkọta amụmaamụma amụmandị ahịa
Sean na-egosipụta ọnọdụ, izi ozi na mkpokọta usoro ịga ahịa maka usoro Infer nke usoro nyocha ọhụụ na-esote ọgbọ. Ozugbo afọ ojuju Infer onye ahia ya onwe ya, Sean sonyeere Infer site na Nitro, ụlọ ọrụ ngwanrọ nke dabeere na San Francisco, bụ ebe ọ mepụtara ma duzie otu ndị na-azụ ahịa ahịa ụwa. Sean nwere ogo dị elu site na Suffolk Sawyer School of Business na North East n'otu usoro azụmaahịa na njikwa ọrụ.
Yashi Mgbasa Ozi Video site na Geographic Region